Raysalwasaare Kheyre iyo wefdigiisi oo Adis Ababa lagu soo dhaweeyey - Wargane News
Home Somali News Raysalwasaare Kheyre iyo wefdigiisi oo Adis Ababa lagu soo dhaweeyey
Raysalwasaaraha xukuumada federaaliga ah ee Soomaaliya Xassan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminaayo ayaa maanta oo Isniin ah ka degay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaas oo ay uga qeybgalayaan shir aan caadi ahayan ee ay yeelanayaan hogaamiyaasha urur gobolleedka IGAD.
Wasiiro ka tirsan xukuumadda Adis Ababa ayaa garoonka diyaaradaha ee Bole International ku soo dhaweeyey wefdiga Raysalwasaaraha kadib waxa uu kulan la qaatey Raysalwasaaraha Itoobiya H. Desalegn.
Shirka IGAD waxaa looga hadlayaa xaaladda Suudaanta Koonfureed, waxaana ku dhawaaqey shirkan Raysalwasaaraha Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi ayey ahayd in uu ak qayb-galo waxana Madaxweynuhu sheegay in hawlo badan u yaalaan sidaas darteed uu booskiisi u diray Raysalwasaaraha.
Safarka Ra’iisul Wasaaraha uu ku tagayo Addis Ababa ayaa noqonaya kii u horeeyay ee uu ku tago, sidoo kale waa safarkii labaad oo uu dalka dibaddiisa uga ambabaxo, isagoo bedelay madaxweynaha Soomaaliya oo markii hore qorshuhu uu ahaa in madaxweynuhu ka qaybgalo.